Ndokumbirawo Usapindure kune Yemagariro Media Kumbira Nenzira Iyi | Martech Zone
Ndokumbirawo Usapindure kune Yemagariro Media Kumbira Nenzira Iyi
Muvhuro, October 23, 2017 NeChishanu, Gumiguru 27, 2017 Douglas Karr
Imwe yandinofarira mafoni ekushandisa ndeye Waze. Iyo inondifambisa kubva kure nemigwagwa, inondibatsira kunzvenga njodzi, uye inondinyevera nezvemapurisa ari mberi - achindiponesa kubva kumatikiti anomhanyisa kana ndikaswera ndichirota uye ndichikwira kupfuura muganho.
Ini ndaive mumotokari rimwe zuva uye ndakafunga kumira padhuze nefodya kuti nditore chipo cheshamwari, asi ndakanga ndisina chokwadi kuti ndedzipi dzaive padhuze. Mhedzisiro yacho yaisanyanya kunakidza… ine chitoro chefodya makiromita makumi mana nemaviri kubva ipapo akanyorwa sekuti "pakandikomberedza". Saka, ndakaita izvo chero mutengi akanaka aizoita. Ndakatora skrini ndikaigovana naWaze.
.@waze iwe unonyatsofunga kuti ndinofanira kutyaira makumi mana nemazana mana emamiriyoni fodya? Handifunge kuti izvo "zvakandikomberedza". pic.twitter.com/lLB8pukoQm
Nehurombo, iyi ndiyo mhinduro yandakagamuchira:
Haiwa! Unogona kuendesa bug bug pano: https://t.co/FnxjYba2tF
- (@waze) October 20, 2017
Kwandakapindura ipapo ipapo:
Ini ndangozvitaurira pano.
Tambo yakamira ipapo.
Handina chokwadi kuti mangani makambani anoita izvi, asi zvinoda kumira. Kana iwe ukapa gedhi kukambani yako kuburikidza nevezvenhau kune vako vatengi, iwe unofanirwa kutarisira kuti vataure nyaya nenzira iyoyo, uye iwe unofanirwa vanhu vakapiwa simba rekupindura.
1 mu4 vashandisi vezvenhau vakanyunyuta kuburikidza nevezvenhau, uye 63% vanotarisira kubatsirwa
Ini ndatotora maminetsi mashoma kubva pazuva nekuti ini ndaitarisira nezve mhando yeapp, ini handisi kuzoenda kune imwe peji, zadza boka reruzivo, uye mirira mhinduro ... ini ndanga ndichida kuti uzive app yako yakaputsika kuti iwe ugone kuzvigadzirisa.
Mhinduro huru ingadai yakave Thanks @douglaskarr, ndataura nyaya yacho kuchikwata chedu chekuvandudza.
Tags: Mabatiro evatengivatengi chikumbiroevanhu vezvenhaupasocial media vatengikusvikira
Iwo Akakurumbira uye Anodiwa Matagi Ekuisa muEcommerce
Gumiguru 23, 2017 na7: 16 PM
Kubvumirana zvachose. Ndakaita izvi kakati wandei, uye ndinowana mhinduro yakajairika yekuti "unogona kuzadza chirevo chebug" kana "unokwanisa kutitumira email pa X" - Uye ndapindura sezvamakaita.